Shiinaha 250ml Eco saaxiibtinimo Cook Ware Glass dhadhaminta Cruet Liquid Spice Jar Haanta Dhalooyinka Dhalashada Kaydinta xawaashka leh daboolida iyo warshad qaadada iyo soosaarayaasha | Luhai
250ml Eco saaxiibtinimo Cook Ware Glass dhadhamin karayb Liquid Spice Jar Haanta Dhalooyinka Dhalashada keydinta Weelka leh dabool iyo qaadada
Xirxirida: Sanduuqa Midabka
Sharaxaad: Muraayadda Jar Spice Jar
Magaca badeecada: Weelka udgoon ee udgoon ee udgoon ee udgoon leh oo leh bir bir ah oo aan lahayn birta
Kartida Bixinta ： 100000 Set / Setets per Month
Sharaxaad: Jar dhadhan
Muunado Waqti: 3-7 maalmood oo shaqo
Faahfaahinta xirxirida: xirxirida bulk / sanduuqa midabka / sanduuqa hadiyadaha / sanduuqa cad / sanduuqa bunni
Waqtiga dirida: 30-50 maalmood
Shuruudaha Qiimaha: FOB Qingdao, Shiinaha
Waxaan had iyo jeer si joogto ah kuugu fidineynaa adeegyada iibsadaha ugu miyir qabka badan, iyo noocyada ugu ballaaran ee naqshadaha iyo qaababka leh agabyada ugu fiican. Dadaalladan waxaa ka mid ah helitaanka nashqado qaabeysan oo xawaare iyo dirid loogu talagalay Wanaag-loogu talagalay Shiinaha Jikada Hawada Hawada Dhalooyinka Dhalooyinka, Waqtigaan la joogo, magaca ganacsiga wuxuu leeyahay in ka badan 4000 nooc oo badeecad ah wuxuuna ku helay xaalad wanaagsan iyo saamiyo waaweyn suuqa hadda jira gudaha iyo dibedda .
Si wanaagsan loo qaabeeyey Weelka Kaydinta ee Glass Glass iyo Jar Jar, waxyaabahayaga u qalma waxay leeyihiin sumcad wanaagsan oo adduunka ah sida qiimaha ugu tartanka iyo faa'iidada ugu badan ee adeegga iibka ka dib macaamiisha. Waxaan rajeyneynaa inaan bixin karno badbaado, alaab deegaanka iyo super u adeegida macaamiisheena ka socda adduunka oo dhan isla markaana la dhisno iskaashi istiraatiijiyadeed iyaga oo leh heerarkeenna xirfadeed iyo dadaallada aan loo kala harin
SU'AALAHA LA XIRIIRA:
1.Waa maxay MOQ?
Badanaa MOQ waa 3,000pcs.
2.Can baan ka heli baarka?
Waxaan badanaa ku bixinnaa muunad bilaash ah. Kharashka muunadaha waa la soo celin karaa markii amarku uu gaadhayo tiro cayiman.
3.Hudo intee le'eg ayaa waqtiga hogaaminta muunadku?
Tijaabooyinka jira, waxay qaadataa 2-3 maalmood. Waa lacag la’aan. Haddii aad rabto naqshadahaaga, waxay qaadataa 5-7 maalmood, iyada oo ku xiran naqshadeynta haddii ay u baahan yihiin shaashad daabacan cusub, iwm.
4.Mudo intee le'eg ayey tahay waqtiga soosaarka waxsoosaarku?
Waxay qaadataa 30 maalmood MOQ.Waxaan leenahay karti wax soo saar oo ballaaran, taas oo hubin karta waqtiga dhalmada degdegga ah xitaa tiro badan.
5.Waa noocee faylka aad u baahan tahay haddii aan doonayo naqshadayda?
Waxaan leenahay naqshadeeye u gaar ah guriga.So waxaad ku siin kartaa JPG, AI, CDR ama PDF, iwm Waxaan ka dhigi doonaa shaashadda daabacaadda si aad u xaqiijiso ugu dambeysa ku saleysan farsamada.
6.Miyaad ku dhejin doontaa calaamadeena ama sida aan ku codsanay?
Waxaan ku dhejin karnaa calaamadaha dhalada iyo daboolka, wixii calaamado kale ah sida aad dalbato.
Tiro yar ma aqbali kartaa shirkaddaada?
Waxay kuxirantahay, hadii aan hayno alaabta keydka ah, waxay bixin kartaa tiro yar.Waa inaad labalaab ku hubiso iibkeena.
8.Waa maxay muddada bixintaada?
Waqtigeena lacag bixinta ee caadiga ah waa TT 30% dhigaalka kadib amarka la saxeexay iyo 70% oo ka dhan ah nuqulka B / L.
9. Immisa midab ayaa la heli karaa?
Waxaan u dhigmaynaa midabbo Nidaamka Iswaafajinta PANTONE.Sidaa darteed waxaad noo sheegi kartaa lambarka midabka PANTONE ee aad u baahan tahay.Waxaan u dhigmi doonnaa midabada.ama waxaan kugula talin doonnaa midabbo caan ah.
10.Sidee noocee ah shahaadada aad lahaan lahayd?
Hore: 250 ml Weelka keydka jikada Xawaash dhalo udgoon Dhalo Galaas Cusbo Sonkor leh oo shaabadaysan oo leh Burush iyo Qaadada Saliida Dheriga
Xiga: Eco saaxiibtinimo dhululubada Clear Glass Jar Round Ball Cork dabool 4oz
Tayo sare leh 120ml Small Glass Spice Jar oo S ...
120 ml galaas dhalada basbaaska udgoon udgoon dhalada leh p ...